Macbadyo dhaadheer ama gaaban? Ogow kuwa adiga kugu habboon | Ragga Stylish
Noocyo sidee ah ayaa kaa dhiga mid soo jiidasho leh?
Waa wax aan caadi aheyn oo awood u leh wax sida umuuqda mid aan muhiimad laheyn sida gubashada dhinaceeda ay leedahay marka laga hadlayo sameynta wajigeena mid aad u qurux badan ama indhaha indhaha dadka. Sida timaha, qaabka ugufiican uguna sasabashada badan dhinacyada waa in lagu calaamadeeyaa qaabka wajigeena, mana aha dookhyadayada shaqsiyeed, sida had iyo jeer dhacda. Ku billow adiga oo muraayadda iskaga eegaya si taxaddar leh oo ujeedo leh. Miyaad u maleyneysaa in wejigaagu yahay oval ama dheereyn?
Kordhi dhinacyada sida ay udhaafaan badhtamaha dhegta haddii wajigaagu uu oval yahay, sida Niall Horan sameeyo oo kale. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad iswaafajiso qaabka wejigaaga, marba haddii ay dhererku sii dheeraadaan, wajigaaga oo ciriiri ah ayaa soo muuqan doona. Soo hel dhererkaaga ugu fiican inta u dhexeysa dhegta iyo dhexda. Hoos u dhig qeybta hoose, maya, ilaa aad toogato filim xilli ama aad ku jirto koox rockabilly ah.
Ragga wajiga dheer leh waa inay ka dhigaan guntooda dhinaca oo gaagaaban haddii aad rabto inaad wajigaaga ka dhigto mid indhaha u roon. Hadana, inta ka gaaban, wejigaaga ayaa sii muuqan doona. Laakiin xusuusnow, waligaa ha xiirin macbudka oo dhan, maxaa yeelay taasi waxay sababi doontaa saameyn aad u yaab badan oo aan fiicnayn. Nuqul ka samee Olly Alexander oo ka tag ugu yaraan nus inji. Waa hal shay in la xidho boogag gaagaaban iyo wax kale, in aanad lahayn gubasho.
Haddii aad u maleyneyso in qaabka wajigaaga uu yahay mid iswaafajin kara, taasi waa, mid aan badneyn ama aad u dheereyn, waxa ugu horeeya waa inaad uga mahadcelisaa waalidiintaada inay kuugu soo gudbiyeen macluumaad hidaha wanaagsan. Kaftanka iska dhaaf, waxaan kugula talineynaa inaad doorato dhererka caadiga ah (dhegaha badhkiis), milimitir kor, milimitir hoos, in kastoo runtii, dadka leh qaabka wajiga ugu fiicani waxay doorbidaan nooc kasta oo barar ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » Noocyo sidee ah ayaa kaa dhiga mid soo jiidasho leh?
Qarsoon Varela dijo
Waad ku mahadsantahay talooyinka !! 🙂 Salaan
Ku soo jawaab Varela Intimate
Gadhka beenta ah ee ragga casriga ah